काँग्रेस महाधिवेशन : 'छोडिदेउ अब दाईको गुट , युवाहरु बन एकजुट'
शुक्रवार, श्रावण २३, २०७७ ०२:३४:१९ युनिकोड
देशभरका १४ जिल्लामा कर्फ्यु आदेश जारी ( जिल्लाको सुचि सहित)
नवलपुर : राजमार्गमा ढुङै ढुङ्गा , दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो
सिजि ल्याण्डमार्क : अत्याधुनिक सपिङमलले सुरक्षित तवरले सेवा दिंदै
वैज्ञानिक वन, कहाँ चुक्यो फेकोफन ?
जन्मदिनको फजुल खर्च कटाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएका ब्यक्तिको परिबारलाई सहयोग
रजहरको प्राकृतिक चिकित्सालय कोरोना उपचारमा देशकै उत्कृष्ट : मुख्यमन्त्री
नेकपा भित्रको विवाद बैचारिक होईन , ओलीले पद छाड्न आबश्यक छैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ्ग
नवलपुर :तस्कर र प्रहरीको सेटिङमा नदिजन्य पदार्थको दोहन भएको स्थानीयको आरोप
प्रहरीमा कोरोना आतंक : हेडक्वार्टरका थप २३ जनामा संक्रमण पुष्टी
आइतवार, श्रावण ११, २०७७ रमेश बस्ताकोटी
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन यही सालको फागुनमा गर्ने गरि कार्यतालिका सार्वजनीक भएको छ । महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यता वितरण लगायतका कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेका छन् । यो सन्र्दभमा यती बेला फेरी एकपटक सबैको ध्यान नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन तिर तानिन सुरु भइसकेको छ ।
नेपाली काँग्रेस मुलुककै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । काँग्रेसले महाधिवेशन मार्फत् लिने निति तथा कार्यक्रमले समग्र नेपाली जनता र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण पनि काँग्रेसको महाधिवेशन प्रति आम चासो हुनु स्वभाविक हो । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन निति तथा कार्यक्रमका हिसावले त महत्वपुर्ण छदैछ , त्यो भन्दा महत्वपुर्ण अर्को पक्ष भनेको नेतृत्वको हो ।
विपि कोइरालाले युवा अबस्थामानै नेपाली काँग्रेस पार्टी को स्थापना गरेका थिए । बिपी कोइराला ३५ वर्षको उमेरमा पार्टी सभापति बनेका थिए र ४३ वर्ष को उमेरमा देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । मदन भण्डारी ४१ बर्षको उमेरमा नेकपा एमालेको महासचिब बनेका थिए । बेलायतका प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुन ४१ बर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन ्। बाराक ओबामा अमेरिकाको सबैभन्दा कान्छो उमेरमामा राष्ट्रपति बनेका हुन् । यसको मतलव नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई अहिले सम्म युवाहरुले नेतृत्वनै गरेनन् भन्ने होईन । नेपाली काँग्रेस पार्टी स्थापना हुँदा यसका सस्थापकहरु सबै जुझारु युवा थिए । नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका लागि युवा अबस्थामा नै यसका संस्थापकहरुले काँग्रेस पार्टीको स्थापना गरेका थिए ।
चौधौं महाधिवेशनको रौनक सुरु भएसंगै काँग्रेस भित्र फेरी एकपटक युवा नेतृत्वको बिषयले प्रवेश पाएको छ । अहिलेका नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा ७४ बर्षका भए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ बर्षका भए । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला ६१ बर्षका भए भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ं७१ बर्षका भए । यसको मतलब काँग्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका सबै नेताहरु ६० कटिसकेका छन् । यो भन्नुको अर्थ नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई विगत लामो समयदेखि ६० कटेको पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको छ । यसो भन्दै गर्दा उहाहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको हैन । नेपाली काँग्रेस निर्माणमा उहाँहरुको अतुलनीय भुमिका छ । पटक पटक जेल नेल भोगेका नेताहरु हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रका लागि लामो समय लडेका अत्यन्तै आदरणीय नेताहरु हुनुहुन्छ । तर यसको मतलब यो पनि होईनकी आराम गरेर एउटा अभिभावकको भुमिकामा बस्ने बेलामा नेतृत्व छाड्दै नछाडी बस्नुपर्छ भन्ने ।
यसो भनिरहँदा कतिपयले भन्लान् युवा उमेरले हुने कुरा होइन बिचारले हुने कुरा हो । यो तर्क पनी आउँछ । यो पंक्तिकार पनि त्यो कुरा संग असहमत राख्दैन । अर्थात् युवा जोश र जाँगरले भरिपुर्ण बिचार ६० कटेका नेताले राख्न सक्दैनन् भन्ने होइन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदाहरण हेरौं , उनि आफु भन्दा कयौं सिनियर नेताहरुलाई पछाडी छाडेर आज यो स्थानमा आईपुगेका हुन् । उनकै बिचारका कारण उनकै नितिका कारण अहिले दोस्रो कार्यकाल पनि भाजपाले एकछत्र शाशन चलाईरहेको छ । यसको मतलब मान्छे बुढो हुँदैमा बिचार र निति पनि पुराना हुन्छन् भन्ने होईन । तर के हाम्रो देशको हकमा अझै नेपाली काँग्रेस पार्टी भित्र त्यो अबस्था छ त ? सबैले एकपटक गम्भिर भएर सोचौं ।
नेपाली काँग्रेसको बर्तमान नेतृत्वले स्पष्ट रुपमा न कुनै कार्यक्रम दिन सकेको छ , न त कुनै कार्यदिशानै छ । कम्युनिष्टहरुको लहलहैमा लागेर यही नेतृत्वले पार्टीको आकार कहाँ पु¥यायो यहाँ भनिरहनु नपर्ला , त्यसकारण अब शेरबहादुर , रामचन्द्र , सिटौला लगायतको पुस्ताले बिश्राम गर्नुपर्छ । पार्टीमा अब युवा नेतृत्व स्थापित हुन आबश्यक छ ।
काँग्रेस भित्र कयौं सक्षम र आशा लाग्दा युवाहरु नेतृत्वमा आउन सक्ने ल्याकत राख्ने खालका छन् । के सबै उनिहरुलाई ६० कटेको पुस्ताको पछि लगाएर उनिहरुको सिर्जनशिलता लाइ मारिरहने हो ? अब प्रश्न यहाँनेर गम्भिर रुपले उठेको छ । अहिले पनी नेपाली काँग्रेसमा चन्द्र भण्डारी , बिश्वप्रकाश शर्मा , बालकृष्ण खाँड , धनराज गुरुङ्ग , गगन थापा , गुरु घिमिरे , बद्री पाण्डे , प्रदिप पौडेल , महेन्द्र शर्मा जस्ता अत्यन्तै आशा लाग्दा युवाहरु छन् । जसले यो पार्टी र देशका लागि आफ्ना बिचारद्धारा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा कम्युनिष्टहरु पनि स्विकार गर्छन् । माथी नाम उल्लेख गरिएका भन्दा पनि धेरै आशा लाग्दा युवा नेताहरु काँग्रेसमा छन् । सबैको नाम उल्लेख गरिरहन संभव भएन । यसको मतलव के हो भने काँग्रेसलाइ नेतृत्व गर्नका लागि युवाहरुको एउटा अत्यन्तै क्षमतावान समुह तयार भइसकेको छ । त्यसकारण अब युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अब यो बिषयमा सोच्न आबश्यक छ । सधै शेरबहादुर दाई , रामचन्द्र दाइ सिटौला दाई , शशांक दाइ फलानो दाई र डिस्कानो दिदि भनेर पछि लाग्नुको साटो अब सोच बिचार गरेर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आबश्यक छ । यसका लागि काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा तत्लो तहबाटनै व्यापक मात्रमा युवाहरु निर्वाचित भएर आउन जरुरी छ । देशभरि युवाको पक्षमा महोल बनाउन सकियो भने त्यो असंभव पनि छैन ।
अब यहाँनेर फेरी अर्को कुरा आउला युवा भनेका नेताहरुनै तिनै दाईहरुको चाकडी गर्छन् र पिछलग्गु छन् । अनि युवा नेतृत्वको बहस गर्नुको के अर्थ , युवा भनेका नेताहरुनै केन्द्रीय सदस्य जित्नका लागि दाइहरुकै आर्शिवाद नपाइ संभव छैन भने युवा नेतृत्वको बहसको के अर्थ ? यो कुरामा विलकुल सत्यता छ । हो , अहिले युवा भनेका नेताहरु कुनै न कुनै दाईको गुटमा सामेल छन् । उनिहरु ति गुटबाट बाहिर निस्केर समग्र युवाको हितमा बोल्ने आँट गर्लान् ? नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्लान् ? भन्ने कुरा शंकाकै घेरा भित्र छ । तथापि हामीले काँग्रेस भित्र युवा नेतृत्वको बहस चलाउँदै गर्दा समग्र पार्टीको परिवेशलाई नबुझी चलाएका हैनौं ।घेरा बाट निस्केर आउन गा¥हो अबश्य होला तर ईच्छाशक्ती भयो भने असंभव पनि छैन ।
त्यसकारण काँग्रेसका युवानेताहरु अब एक ठाउँमा उभिन आबश्यक छ । नेतृत्वमा जर्वजस्त हस्तक्षेप गर्ने हो भने युवाहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्पनै छैन । यदी एक ठाउँमा उभिएर देशभरि युवा नेतृत्वको पक्षमा महोल नबनाउने हो भने फेरी पनि दाइहरुकै जिउहजुरी गर्ने हो अनि नेतृत्वमा पुग्नका लागि ७० बर्ष पुग्ने दिन कुरेर बस्ने मात्र हो । त्यसकारण १४औं महाधिवेशन युवानेताहरुको लागि परिक्षाको घडी पनि हो । यो परिक्षामा खरो उत्रिएर एक पटक १४औं महाधिवेशन मार्फत् युवा नेतृत्व स्थापनामा जोड दिऔं । नेतृत्वमा को पुग्ला त्यसलाई महत्वपुर्ण बिषय नठानौ मुल कुरा युवा पुस्ता नेतृत्वमा पुग्नु हो । आज एउटा युवा पुग्यो भने भोलि अर्को युवा अबश्य पुग्छ । त्यसले गर्दा पार्टी चलायमान हुन्छ । बिपक्षी संग लड्न सजिलो हुन्छ । त्यसकारण सबै युवा नेताहरुले यो पटक यो या त्यो नभनि युवा नेतृत्व स्थापना अभियानमा सघाउन जरुरी छ ।
यसमा अहिलेको काँग्रेस नेतृत्वले पनि सघाएर युवाहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सके झनै सुनमा सुगन्ध हुने थियो । अब ६५ ७० कटेका नेताहरु अभिभावकीय भुमिकामानै बस्दा उत्तम हुन्छ । यो लेख लेख्दै गर्दा पंक्तिकारको न कुनै नेता संग आग्रह छ , न त कुनै पुर्वाग्रह मात्र काँग्रेस भित्र चलायमान युवा पुस्ता आउनु पर्छ भन्ने अभियान स्वरुप यो लेख लेखिएको हो । त्यसकारण देशभरका युवा साथीहरुले अब काँग्रेस भित्र युवाको नेतृत्वको अभियानलाइ व्यापक बनाउन आबश्यक छ । समय अब आएको छ , यो पटक महाधिवेशन मार्फत् युवा नेतृत्व स्थापित भयो भने मात्र सहि अर्थमा काँग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ अर्थात् काँग्रेस फेरी एक पटक मुलुकको ठुलो पार्टी बनेर मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छ । यसका लागि यो पटक काँग्रेसको मुल नेतृत्व तहमा युवाहरुलाई पु¥याउनै पर्दछ । काँग्रेसका युवाहरुले हिम्मत गरुन् अब दाइको गुट छाडेर युवाहरु एकजुट हुन आबश्यक छ । दाईको गुटमा बसिरहने हो भने पालो आउँदैन , भाईहरुको गुट बनाएर एकहजुट हुने हो भने यो पटक नभएपनि फेरी अर्को पटक पालो अबश्य आउँछ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, श्रावण ११, २०७७, ०६:०५:००
सन्दर्भ विपि स्मृति दिवस : विपि , म र काँग्रेस
देशभरका १४ जिल्लामा कर्फ्यु आदेश जारी ( जिल्लाको सुचि सहित) बुधवार, श्रावण २१, २०७७
सिजि ल्याण्डमार्क : अत्याधुनिक सपिङमलले सुरक्षित तवरले सेवा दिंदै आइतवार, श्रावण १८, २०७७
नमूना बन्दैछ मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल
सरकारी बिद्यालयमा निशुल्क अग्रेजी माध्ययममा पढाई